UGomes waboza waze wazibona kwayena, waqoka ukuba ngunompempe
February 18, 2022 Impempe.com
Umuntu usuke engaliphiwanga ngampela ikhono lokudlala ibhola uma ezozibona yena ukuthi uyaboza bese ecela ukuliyeka yize abaqeqeshi bakhe bezama ukumeseka bamsize.
Yilokho ke okwenzeka kunompempe ophambili wakuleli uVicor Gomes osanda kuduma umhlaba wonke ngemuva kokushaya impempe emdlaweni wamanqamu kwi-Africa Cup of Nations eCameroon.
Indlela awuphatha kahle ngayo lo mdlalo – akuzange kudingeke ukuthi ahlaziye izinqumo ngohlelo lweVAR – yahlaba umxhwele wonke umuntu.
Kodwa ke isigameko esamakhela igama kakhulu yila aqondisa khona isihlabani se-Egypt neLiverpool uMo Salah ngokumnikeza impempe namakhadi ukuthi azidlalisele yena lo mdlalo ngoba ucabanga ukuthi engenza kangcono.
Elandisa abeSunday World ngokuthi wangena kanjani ekushayeni impempe, uGomes ukhulume iqiniso wathi lamehlula ibhola waze wacela ukunikwa okunye angakwenza ngoba wayelithanda engafuni ukusuka kulo.
“Ngangiboza okwangempela. Ngangidlala emuva kwesokudla,” kuzivumela lo nompempe odume ngokungacucuzi ekukhipheni amakhadi abomvu.
FUNDA NALA: UBenni ucashe ngesithupha ebuzwa ngendaba yokudlala kukaSithebe kuMaZulu
“Kodwa ngangilithanda ibhola. Yikho nje ukuthi lalingihlula uma sekumele lidlalwe, Ngazama bandla. Kodwa kuthe ngineminyaka engu-14, ngacela umqeqeshi ukuthi akanginike impempe ngidlalise okungcono.
“Ngaqoka lapho ukuthi ngiyeke ukudlala ngabe sengithola uthando olusha lokushaya impempe. Ngagxila kulokho ke futhi okwenzeka ngemuva kwalokho sekuwumlando,” kuchaza uGomes.
“Kuningi okumangazayo osekwenzekile kulolu hambo (lokuba ngunompempe). Kodwa ngabe angikho lapha ngaphandle kokwesekwa wumndeni wami, iSafa, usosesheni wangasekhaya nabasizi bami oZakhele Siwela noSouru Phatsoane asebefana nabafowethu,” kusho yena.
Previous Previous post: UBenni uphinde wacasha ngesithupha ngolukaSithebe oSuthwini
Next Next post: Baphindeke engeqiwa ntwala abashayisibhakela kubhuntsha izimpi